Aqriso: 18-Qodob oo Laga Soo Saaray Shirkii Madasha Qaran Ee Muqdisho – idalenews.com
Muqdisho(INO)-Madasha Hoggaanka Qaran (MHQ) ayaa kulan ku yeelatay magaalada Muqdisho 06 – 12 Seteember 2016 ka. Kulanka waxaa shir-guddoominayay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana ka soo qayb galay Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka, Mudane Maxamed Cusmaan Jawaari; Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka, Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke; Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka Xukuumadda Federaalka, Mudane Maxamed Cumar Carte; Madaxweynaha Puntland, Mudane Cabdiweli Maxamed Cali-Gaas; Madaxweynaha Jubbaland, Mudane Axmed Maxamed Islaam; Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan; iyo Madaxweynaha Galmudug, Mudane Cabdikarin Xuseen Guuleed.
1. Madaxweynaha: Ayaa soo dhoweeyey dhammaan ka qaybgalayaasha si gaar ahna uga mahadceliyey Beesha caalamka. Madaxweynaha wuxuu hoosta ka xariiqay in muddada la haysyto ay aad u kooban tahay loona baahan yahay in si wadajir ah loogu guntado dardargelinta doorashooyinka waqtiga oo aad u kooban awgeed. wuxuna gaar ahaan ula hadlay Beesha Caalamka ina ay ilaaliyaan ballanqaadyadii taakulaynta fulinta doorashooyinka dadban ee 2016.
2. Ergayga Gaarka ah ee Qaruumaha Middobay; Michael Keating: oo hadal dheer ka jeediyey furitaanka madasha oo ay goobjoog ahaayeen qaar ka mid ah deeqbixiyeyaasha beesha caalamka. Arrimaha uu taabtay waxaa ka mid ahaa Dhamaystirka Dhismaha maamul-Goboleedka ee Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe, Geeddisocodka Dib-u-eegista Dastuurka, Arrimaha Doorashooyinka Dadban iyo arimmaha amniga. Wuxuuna mar kale Madasha u xaqiijiyay in beesha caalamku ay diyaar ula tahay taageero buuxda kuna dadaali doonaan in waxa walba waqtigeeda lagu bixiyo.
3. Madasha Hogaanka Qaran waxay guddiyada GFHDD iyo GDGHDD ku bogaadisay horumarka laga gaaray u diyaar-garowga loogu jiro geedi-socodka doorasho ee 2016, oo ay ka mid yihiin kulammada u billowday odayaal dhaqameedka oo looga arrinsanayo diyaarinta ergooyinka doorashada dadban ee u codayn doonna kuraasta 275 ta ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka.
4. Madashu waxay mar kale ku celisay ballanqaadkeedii ahaa in geedisocodka doorashooyinka uu noqdo mid daah-furan, laguna kalsoonaan karo. Si taas loo helona, madaxda MHQ waxay hoosta ka xariiqeen in aanay jiiri doonin isbedel lagu samayo mabaadii’da asaasiga ah iyo hanaanka geedi-socodka doorashada. Madaxda Madashu waxay carrabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay wacyi-gelinta dadweynaha iyo war-gelintooda, waxayna ugu baaqeen GFHDD inay si dhakhso leh u qaadaan tallaabooyinka muhiimka ah ee ku aadan hawshan.
5. Xubin kasta oo kamid ah MHQ wuxuu saxiixay xeerka anshaxa loo dejiyay ilaalinta daahfurnaanta, hufnaanta iyo habsami u socodka howlaha doorashooyinka dadban. Madashu waxay ku boorrisay dhammaan musharaxiinta u tartamaysa kuraasta Baarlamaanka iyo Xafiiska Madaxweynaha Jumhuuriyadda Federaalka inay saxiixaan xeer-anshaxeedkan. GFHDD waxaa loo xilsaaray inuu xaqiijiyo in musharrax kasta oo u tartamaya Aqallada Baarlamanka in arjigiisa ku lifaaqan yahay xeer-anshaxeedkan oo saxiixan.
6. Madashu waxay mar kale ku celisay ballan-qaadkeedii ahaa in xubno iyo hay’ado Soomaaliyeed iyo kuwo caalami ahba awood loo siiyo inay goobjoog ka noqdaan oo ay u kuurgalaan geeddsocodka doorashada. Guddiga GFHDD ayaa loo xilsaaray inuu degdeg uga hawlgalo dhammaystiridda habraacyada iyo xeerarka khuseeya arrinkaas, marti-qaadna loo fidinayo xubnaha iyo hay’adaha Soomaaliyeed iyo kuwa caalamiga ah, loona dhamaystiro arrimaha maamuleed ee la xiriira goobjoogenimadooda.
7. Madaxda Kulankoodi 6da Seteemabr 2016 waxay welwel ka muujiyeen maalgelinta miisaaniyadda lagu fulinaayo doorashooyinka dadban ee Golayaasha Sharcidejinta Qaranka, dareenkaas oo keenay (b) in miisaaniyadda qarnka ee 2016 oo aan ku jirin Madax-xige loogu qoondeeyey fulinta Doorashooyinka, iyo (t) ayadoo si cad ayna u muuqan sida loo heli doono qoondaha taakulaynta dhaqaale laga filanayo deeqbixiyeyaasha beesha caalamka. Saa daraadee Madashu waxay guddonsatay:
8. Madashu waxay mar kale caddeyneysaa in Odayaal dhaqameedka 135 ee 2012 ay yihiin saldhigga liiska Odayaal-Dhaqameedka ka hawlgalaya arrimaha doorashooyinka dadban ee 2016. Waxaa sidoo kale liiska asalka ah lagu daray duubkii lagu soo beddelo duub geeriyooday. Kulanka Madashu Ka dib markii uu qaddariyey nuxurka soojeedimaha Guddiga GFHDD ee ku saabsan arrimaha odayaal dhaqameedka iyo maaraynta doorashada dadban waxay gudoomisay:
9. Si loo xaqiijiyo qoondaha kuraasta haweenku ku yeelanayaan Golayaasha Baarlamaanka Federaalka Madashu waxay guddoomisay in:
Beeshii Golaha Shacabka ku leh sadax (3) kursi waa in uu midkood ahaado kursi haweenka reerkaas keliya ku tartamaan;
Sidoo kale, Beelaha kale oo bah ahaan isu xiga waxaa kuraastooda laysugu celcelinaya sida ay isu xigaan oo ay isu leeyihiin, ka dibna sadaxdii kursiba waxaa laga doonaya in laga soo saaro hal kursi oo ay haweenka keliya ku tartamaan;
10. Madashu intii uu socday kulenkeedan 6-12 Seteembar 2016 waxay ansixisay waajibaadka iyo awoodaha Guddiiga Xallinta khilaafaadka, waxaana isla markaas la dhisay lana ansixiyey xubnaha Guddiga.
11. Madashu waxay mar kale ugu baaqeysaa muwaaddiniinta deggan Gobollada Shabelellada Dhexe iyo Hiiraan in ay wadajir, midnimo iyo daris wanaag muujiyaan oo ay sida ugu fudud uguna dhakhsiyaha badan usoo dhistaan Maamul Goboleedkooda. Sido kale Xukuumadda Federaalka waxaa loo xilsaaray in wixii tas-hiilaad ah ee loo baahan yahay ay u fidiso abaabulka iyo fulinta dhismaha Maamul-Goboleedka, arrimaha la xiriira doorashooyinkana go’aan kama danbays ah ka gaarto.
12. Madashu Ka dib markii aragtay cabashooyinka badan ee ka imanaya qaybaha bulshada soomaaliyeed qaddarisayna muddada kooban ee la haysto in lagu fuliyo doorashooyinka dadban, waxay go’aamisay in tirada kuraasta Aqalka Sare lagu xaddido konton iyo affar xubnood (54) sida waafaqsan Dastuurka Federaalka iyo heshiiskii Madahsha ee 12 Abriil 2016.
13. Guntanka fadhiga iyo codeynta ergada: Madashu waxay go’aamisay in Guntanka fadhiga codeynta ergada oo ka kooban 51 xubnooda wuxuu ku ansaxaya markii ay goobjoog yihiin oo ay codeeynayaan ugu yaraan 41 xubnood, oo u dhiganta 80% tirade guud ee ergada;
15. Madashu ayadoo aqoonsan in loo baahana yahay in doorashooyinka tooska ah ee la filayo in la qabto 2020 noqdaan gundhig si adag u dhidibba aasaya dimoqdraadiyeynta dalka, waxay ugu baaqeysaa beesha caalamka in taageero isla garabtaagto Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qoranka.
16. Madashu si qotadheer ayey uga wada hadashay layslana meeldhigay sugidda amniga dalka guud ahaan iyo sugudda amniga doorashooyinka gaar ahaan;
17. Madashu waxay kaloo guddoomisay in la dhiso Guddiga Amniga Qaranka oo ka kooban; Madaxweynaha Jumhuuriyadda oo Guddoominaaya ayna ka mid yihiin: Guddoomiyaha Golaha Shacabka, R/Wasaaraha Xukuumadda Federaalka, Madaxweynayaasha Dowlada Goboleedyada, Wasiirrada Xukuumadda Federaalka ee Amniga, Caddaaladda, Gaashaandhigga, Maaliyadda iyo Arrimaha Dibadda.
Uhuru Kenyatta: Qurbo-joogta Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in Dalkooda ay Maal-gashadaan”